Roku waa inay ahaato mid ka mid ah streamers warbaahinta ugu fiican in aad qabto karaa daawashada online videos iyo sidoo kale faylasha aad mobile ee deegaanka soo bandhigay weyn aad TV ee. In kastoo ay tahay awood badan iyo faantaa ay taageero ballaaran ee channels dhowr ah oo ka badan 1000, waxaa weli jira dhibaatooyin marka aad isticmaalayso sanduuqan geeyo smart, ma jiraan? Laakiin waa wax loo baahan yahay in ay haatan ka welwelin, tan iyo markii aad halkan inala jira. Waxaanu ku siin doonaa talooyin dhib waxtar u leh dhibaatooyinka yaabo inaad la kulanto jidka. Haddii dhibaato aad lama bixiyo, fadlan hubi hagahan >>
Dhibaatada 1: Aan qaabab file ku filan deegaanka waxaa taageera
Tani waxay noqon kartaa dhibaato weyn marka aad qof dareen faylasha aad mobile ayaa si Roku sababta oo ah qaabab la jaan qaada Roku waa dhif iyo naadir. Waxay yihiin MKV, MP4, MOV, wmv . Maxaa dhacaya haddii files yihiin oo keliya ma aha ee kala duwan, sida faylasha 3GP? Xaaladahaas oo kale, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad si ay u caawiyaan. Tani waa waxa Allcast waxaa loogu talagalay. Eeg sida aad u Roku qulquli karaan qaab kasta oo halkan.
Dhibaatada 2: saxaafada ma qulquli karaa PC in Roku
Ma jiro workaround rasmiga ah ee warbaahinta hoorto ka PC in Roku iyo sida ugu wanaagsan ee ay sameeyaan waa in ay isticmaalaan desktop saddexaad xisbiga-qalab. Wondershare Video Converter Ultimate , ay Server Media plugin awood badan, waa barnaamij ku qasban tahay isku day ah oo u saari karaa mid ka mid ah aad files deegaanka si ay Roku kaliya click ah. Eeg tilmaan faahfaahsan halkan .
Dhibaatada 3: buffers Video ama tayo hooseeyo
Tani waxay noqon kartaa dhibaatada ugu weyn marka hoorto online videos iyo sidoo kale aad files deegaanka, taas oo uu leeyahay badan oo la sameeyo iyada oo la xidhiidha aad internet. Waxaa lagu talinayaa in xawaaraha ee computer kasta ama aalad waa in ay ahaataa 3 Mbps. Haddaba sidaas daraaddeed waxaad u baahan doontaa in aad tijaabiso si aad xawaaraha internet ka halkan . Haddii network waa u gaabiyaa, waxaa weli jira qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee aad samayn karto halkii ay beddelaan bandwidth. Tallaabooyin waxaa ka mid ah:
Dhow dhaqaaq router ee wireless
Aad ciyaaryahan Roku beddel
Meel ka baxsan faragelinta dhaqaaq la mid ah telefoonada kayd ama kuwa kale
Waxaa la soo jeediyay in aad isticmaasho shabakad banki haddii ay suuragal tahay
Dhibaatada 4: Negeria Roku
Iyadoo Roku keydsho laga yaabaa in aanay noqon dhibaato weyn waayo, dhammaan milkiilayaasha, laakiin waxaa ku jira tiro dad ah oo aan la soo warin waalan by this. Sidaas sida aad uga badbaadi kartaa taasi? Nasiib wanaag, weli waxaa jira waxyaabo aad samayn karto. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad qabow iyo kor u kululaynta. Markaas waxaad u baahan doontaa in firmware updated. La socodsii updated aad Roku ciyaaryahan iyo sidoo kale aad router. Haddii Roku fariisiyo marka aad hoorto channel ka liidata horumariyo, waxaad u baahan doontaa in ay u guuraan madal kale ama ay helaan xal kale. Mararka qaarkood aad Roku Xayiraadda doonaa, maxaa yeelay, aad u ciyaareyso files qaarkood sida MKV. Si taas looga qabto, waxaad isku dayi kartaa diinta files si ay qaabab kale sida AVI la Video Converter Ultimate Wondershare .
Taasi oo dhan dhibaatooyinka caadiga ah marka aad isticmaalayso Roku in durduri files deegaanka ka dibna daawado TV. Haddii aad qabto dhibaatooyin dheeraad ah, waxaad tagi kartaa forum Roku ayaa si aad u hubiso dheeraad ah.
> Resource > Video > Dhibaatooyinka Talooyinka Streaming Media in Roku